နှောင်ကြိုးမိသူ (ဇာတ်သိမ်း) | ပျူနိုင်ငံ
Posted by ကိုအောင် at 10:56
Labels: သရဲ- တစ္ဆေဇာတ်လမ်းများ
အောင်မလေးလေး.........။ ဖတ်ရင်း ကြက်သီးတွေထလိုက်ပုံများဗျာ..........။ ဝါဆိုဦးဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဖူးဆိုတာကို သိနေရက်နဲ.ဖတ်တာကို ကြက်သီးတွေထနေတော့တာပဲ ။ အရင်တစ်ခါ မှတ်ချက်တစ်ခုမှာရေးခဲ့သလိုပဲ......မိုးသည်းသည်းညတစ်ညလောက်များ ဖတ်လိုက်မိလို.ကတော့ အိမ်သာတောင်ထပြီးသွားရဲပါ့မလားပဲ။ Congratulations ပါကိုအောင်ရေ..။ Full of suspense ပါပဲ။
ကိုအောင်။ ထူးဆန်းလွန်းလို့ သိချင်တာ မေးပါရစေ။
27 June 2010 at 15:04
ညဖက် အိမ်သာတော့ သွားပါအုံး၊ တော်ကြာ ဆီးချုပ်
၀မ်းချုပ်ဖြစ်ရင် ကျနော်ပါ တရားခံ ဖြစ်နေအုံးမယ်
တကယ်က 75%၊ အချက်အလက်က 20 %၊ အကွဲအလွှဲ
က 5% ပေါ့ ....း)
ဒီတခါတော့ ကံကောင်းတယ်... လာဖတ်တဲ့အချိန်မှာ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းပါအားလုံးရှိနေပြီ...
ဆရာအောင်ရေ... တဂ်ထားတာလေး ရေးပြီးသွားပြီ...
27 June 2010 at 17:38
27 June 2010 at 17:44
တကယ့် အဖြစ်ပျက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖန်တီးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးသားရော ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့စည်းပုံရော အရမ်းကောင်းပါတယ်..
မြန်မာပြည် ဒါရိုက်တာတယောက်စီပို့ပီး ဗွီဒီယို ရိုက်ခိုင်းရင် ပိုကောင်းမယ် ...
27 June 2010 at 19:09
ဇာတ်သိမ်း တာလည်းမြန်တာ ဖတ်ရတာ အားမရဘူး
27 June 2010 at 19:18
ဇာတ်လမ်းကို အခုလို အဆုံးထိ ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါ၊
ကိုအောင် အားပေးတဲ့ ဂျာမန်အသင်း နိုင်လို့ ပျော်နေ
မှာပဲ၊ အဂ်လန်ဖက် ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ ဒီည အိပ်
ပျော်ကြမယ် မထင်ဘူး။ ဂျာမန် ဖလား ရပါစေ။
28 June 2010 at 01:36
တခြားဘလော့တွေထက် ခင်ဗျားဘလော့ကို ပိုပြီး
28 June 2010 at 01:47
ကိုအေင်ရေ..ဇတ်သ်ိမ်းကို သိနေပေမဲ့ ဖတ်လို့ကတော့
28 June 2010 at 02:11
ကျေးဇူးပါ... ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတယ်... ဒီလိုစာမျိုး ဆက်ရေးပါအုန်း...
28 June 2010 at 04:38
တကယ်က 75% !!!!
28 June 2010 at 08:31
ကိုအောင်ရေ.. ဒီအပိုင်းမှဘဲ အားရပါးရဖတ်ရတော့တယ်..။ ဟိုးအရင်ကတည်းက စာတွေဖတ်လာခဲ့တာ အခုမှကွန်မန့်ပေးဖြစ်တယ်ဗျာ..။ ကြောက်တတ်သူမျာမဖတ်ပါနဲ့ဆိုလည်း ဖတ်တာဘဲ..။ (နည်းနည်းတော့ကြောက်တတ်သူပါ.. မလန့်တတ်ပါဘူး.. =))
ဖတ်ရတာ အရသာရှိလွန်းလှတယ်.. ၇၅% တကယ်ဆိုတော့။ ဖတ်ရင်း အရူးကြီးခိုင်းတာတွေမေ့မေ့သွားလို့ ပြန်ပြန်ဖတ်ပြီးမှ ဆက်ဖတ်ရတယ်..အဆင့်တွေကလည်းများသကိုး..။ အိမ်ထဲမှာဖြစ်တာတော့ သိပ်မလန့်တော့ဘူး.. ဟိုဇရပ်မှာ ဖြစ်တာမှပိုတောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းသေး.. ပတ်ပတ်လည်က၀ိုင်းနေတာဆိုတော့..ပြီးတော့သင်္ချိုင်းမှာ..။ ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက ဥပမာအခုလို ဇာတ်လမ်းတွဲအလိုက်ရေးမယ်ဆိုရင်... Category ကို ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပေးလိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်..။ ဖတ်ချင်သူတွေ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို တစ်ခါတည်းဖတ်လို့ရတာပေါ့..။ Category မှာနည်းနည်းရှုပ်သွားနိုင်ပေမယ့် ဥပမာ “ဖန်တီးခံစားမှု” အောက်မှာ “နှောင်ကြိုးမိသူ”.. “လမ်းကြားသရဲ” ဆိုပြီးတော့ပေါ့..။ စကားစပ်လို့ လမ်းကြားသရဲပို့စ်တုန်းက သတင်းလာပေးတဲ့ Anonymous ကကျွန်တော်ပါ..။ ကိုအောင်ကြိုက်သလိုသာလုပ်ပါ.. ကျွန်တော်ကအကြံပေးရုံသာသက်သက်ပါ..။ နောက်ထပ်စာကောင်းတွေကိုလည်း မျှော်နေပါတယ်။
28 June 2010 at 17:02
ီဒီလို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ စာမျိုးတွေ ဖတ်ရတာ
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဒီလိုမျိုး
အဖြစ်အပျက်တွေ ရေးပါအုံး၊ အကို့ဘလော့ကို နေ့
တိုင်း နီးပါး ရောက်ပါတယ် အကို။
29 June 2010 at 01:09
ကျမက ဒီပို့စ်ဖတ်နေတုန်း ကိုအောင်က ကျမပို့စ်လာဖတ်နေတာကိုး။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ။ ဒီပို့စ်ကတော့ အိပ်ခါနီး မိုးလေးတဖြောက်ဖြောက်နဲ့ ဖတ်ရတာ ရင်ထိတ်လိုက်တာ။ တကယ့်အဖြစ်အပျက် ၇၅% ဆိုတော့ တကယ်ထူးဆန်းတယ်နော်။ ကိုမင်းလွင်အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ ၀ါဆိုဦး သီလရှင်ဝတ်သွားတာတော့ သဘောကျတယ်။ သူလဲ မရူးတာတော်သေးတယ်နော်။ စိတ်မခိုင်ရင် ရူးချင်စရာကြီး။ အင်း ဒီညတော့ တရားနာရင်းအိပ်မှပဲ။ (ကြောက်လို့)
29 June 2010 at 01:37
ကျနော် ဘလော့ဂ် မှာလည်း ကိုအောင် အသစ်က မတက်ဘူးဖြစ်နေတယ် မှားခွင့်ထိဘဲ တက်တယ် ကျနော် အခုပြန်ချိတ်လိုက်အုန်းမယ် ဘာမှားနေလည်း မသိဘူး မုံ့ပေါင်း လုပ်နည်း က သိပ်မသိလို့ပါ ကျနော် သိရင် ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်
29 June 2010 at 06:32
ရင် တထိတ်ထိတ်နဲ့ ရုံးမှာ ခိုးခိုးဖတ်ရတာ....
ပြီးမှပဲ ဟင်းးး ခနဲ သက်ပြင်းချနိုင်တယ်....
29 June 2010 at 11:10
မုန့်ပေါင်းလား လွယ်လွယ်လေး။ မုန့်တွေ အကုန်ပေါင်းလိုက် မုန့်ပေါင်း ဖြစ်ရော .. ဟီး။ ကိုအောင့် မဟေသီကို မုန့်တွေအားလုံး ပေါင်းပြီး ကျွေးလိုက်နော်။ အဲဒါ မုန့်ပေါင်းပဲလို့။ ဟဲဟဲ နောက်တာပါ။
ကျမလဲ မုန့်ပေါင်းကြိုက်တယ်။ ကျောက်မြောင်းထဲမှာ ရောင်းတဲ့ မုန့်ပေါင်းတော့ ခဏခဏ ၀ယ်စားဖြစ်တယ်။ ပဲပါတာနဲ့ မပါတာနဲ့ နှစ်မျိုးနော် ကျမက မပါတာကြိုက်တယ်။ ကျမအထင်တော့ ဆန်မှုန့်နဲ့ လုပ်တာ လားလို့။ နောက်တခါ အမေနဲ့ စကားပြောဖြစ်ရင် မေးထားပေးမယ်။
29 June 2010 at 12:54
29 June 2010 at 22:42
အဲဒီထဲက အကိုနဲ့နံမယ် ဆင်တဲ့ တစ်ယောက်က အကိုလား?
မုန့် ပေါင်းက ဆန်နဲ့ လုတ်တာ။ (စီးရင်ပိုကောင်းမယ်) ဖင်အပေါက်ပါတဲ့အိုးရယ်(rice cooker ထဲကပေါင်းခံပြားနဲ့ လုပ်လို့ ရမယ်ထင်တယ်)၊ ဆလောင်းဖုန်းနဲ့ပိတ်ဖြူစလိုတယ်။
ရေငွေ့ နဲ့ပေါင်းတာပါပဲ။
မုန့် ပစ်သလတ်တော့ ၄၊ ၅ ခါလုတ်မှ အောင်မြင်တယ်...။ စမ်ုးကည့်ပါဦး
30 June 2010 at 04:36
တဂ်ကို ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးဗျာ။
မြန်မာပြည်က ဒါရိုက်တာတွေဆီမှာ ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေ
အများကြီးရှိမှာပါ၊ တချို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတွေတော့
ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ပြီး သူများဟာကို ကိုယ့်ဟာ လုပ်ကြတယ်
လို့ မထင်ပါနဲ့ ….းP
ဇာတ်သိမ်းကို ဘောပွဲကိုက်နေလို့ မနည်းကို ရေးထားရတယ်။
Es နဲ့ KAK ရေ
ဆီးမီးဖိုင်နယ်နဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတော့ ခွင့်ယူပြီး မကြည့်တော့ဘူးလား အကိုကြီး။
ဇာတ်လမ်းထဲက ၀ါဆိုဦး ခဏပဲ သီလရှင်ဝတ်တာပါ ….း)
မကြောက်ပါနဲ့ ….းP
ကျေးဇူးဗျာ၊ အကြံပေးတဲ့အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်
SSH ရေ ကျေးဇူးပါ။
တရားနာရင်း မအိပ်နဲ့လေ၊ တရားမရပဲ ဖြစ်မှာပေါ့ ….း)
မုန့်ပေါင်းလုပ်နည်း ပို့ပေးမယ်ပြောလို့ ကျေးဇူး။
သက်ပြင်း သိပ်မချနဲ့ ကျနော်ပါ လွှင့်သွားအုံးမယ် …းP
မမေဓါဝီ၊ မေးထားပေးမယ်လို့ သိရတာ ကျေးဇူး။
ချောရေ အနောက်ကို လှည့်မကြည့်နဲ့ ရှေ့မှာ ရှိတယ် …းP
အပြင်ကလူနဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက လူဟာ မတူပါဘူး၊ နာမည်တော့
ပြောင်းထားတာပေါ့၊ တူနေရင် ကျနော့်ခေါင်းကွဲသွားမယ်လေ …း)
ဒီဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ နောက်ကြောင်းကို ကြုံရင် ထပ်ရေးပါ့မယ်။
မုန့်ပေါင်းလုပ်နည်း ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
30 June 2010 at 12:44
google reader မှာလဲမတက်လာဘူး အန်တီရွှေဇင်ဦးလိုပဲ မှားခွင့်ပီးတော့မတက်လာဘူး။ ပီးတော့ ဇီဒန်းအနီကဒ်ပိုစ့်ရောက်သွားရော။
အဲဒါကြောင့် ဟိုတစ်ခေါက်ကိုအောင်ကိုလာပြောတုန်းက ကိုအောင်က တင်ပီးပီပြောတာကို ကြောင်သွားတာ။ အပိုင်း၇တင်ပီးတာပြောတာ ထင်နေတာ။
တော်သေးတယ် ကမ္ဘာ့ဖလားပီးမှဆို အရင်အပိုင်းတွေ မေ့ကုန်မှာ။ ကျေးဇူးပါနော်။ သူငယ်ချင်းကိုလဲညွန်းလိုက်တယ် ဒီဘလော့ကို။ သူလဲ ကြောက်ရအောင် :)
30 June 2010 at 20:33
တထိတ်ထိတ်နဲ့ အဆုံးထိ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
1 July 2010 at 17:19
14 July 2010 at 23:43
အဲလိုဇာတ်လမ်းတွေ သိပ်ကြိုက်တာ..ကျေးဇူးပဲ ကိုအောင်
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးက လူကို ရက်ရက်စက်စက်...ကားနှစ်ခါတိုက်ပီး ပေးသေ လိုက်တာကိုး စာရေးဆရာရဲ့ :P အဲ့လို ဇာတ်လမ်းမျိုး ဖြစ်ခဲ့တယ်လို. တစ်ခါမှ မကြားဖူးလို.ဒါကတော့ ဇာတ်ကောင် ဖန်တီး ချက်လို့ထင်ပါတယ်။ စာရေးတာက Professional စာရေးဆရာတွေလို ကောင်းတယ်ပါပေတယ် ဗျာ။
21 November 2010 at 19:32
နှောင်ကြိုးမိသူ အစ အဆုံး လာဖတ်သွားတယ် ကိုအောင်။ ကြောက်စရာကြီး.... မဖတ်ရ မနေနိုင်တော့လည်း အသည်းတယားယားနဲ့ ဖတ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီလို သရဲ တစ္ဆေ အကြောင်းတွေ များများရေးနော်။ ပီားးး ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ပြောသွားပြီ။
28 January 2011 at 00:25
အရမ်းကောင်းတယ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကနေ ဒီလင့် ကိုရတာပါ သရဲအကြောင်းသရဲစာအုပ်တွေဆိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ် နောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုဇါတ်လမ်းတွေ များများရေးပေးပါ အရမ်းရမ်းကိုကောင်းပါ အခုလိုဇါတ်လမ်းကောင်းတွေ ဖတ်ခွင့်ရတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်